Enweghị oke ifufe na Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
Ajọ Ifufe Matthew bụ ajọ ifufe ikpeazụ mebiri ọtụtụ ihe na mbibi onwe onye na bekee Atlantic. Site na June 1 ruo November 30, mpaghara a na-arịa otu n'ime ihe omume ikuku kacha ebibi ụwa niile: ajọ ifufe.
N'ezie, ụbọchị ndị a ị jụọla ajụjụ nke gịnị kpatara na Spain enweghị oke ifufe ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya dịka ajọ ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe.
A na-ekewa ifufe site na edemede, yana 5 bụ nke kachasị dị ize ndụ ma na-ebute mbibi kachasị njọ, dịka o mere na Hurricane Matthew. Banyere ahabụ, ha guzobere maka oge nke afọ 6. N'ụzọ dị otú a, Ajọ Ifufe Matthew nke zọpụrụ ebe dịka Haiti, Cuba ma ọ bụ ụsọ Oké Osimiri Atlantic nke United States n'oge a natara aha ahụ n'ihi na ọ bụ ajọ ifufe nke iri na atọ nke afọ.
Tupu Ajọ Ifufe Matthew adaa, a na-ewere Katrina dị ka nke kachasị ike na nke na-ebibi ihe n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Oké ifufe a malitere na 2005 ma gbuo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1.800 na United States. Na mgbakwunye na nke a, ihe karịrị otu nde mmadụ enweghị ebe obibi na mmebi ihe karịrị nde dollar 150.000.
Anyi aghaghi icheta Ajọ Ifufe Mitch, nke mere na 1998 gburu 9.000 na mba Central America dika Honduras na Nicaragua. N'ihi ifufe karịrị 290 kilomita kwa awa, nde mmadụ abụọ na ọkara hapụrụ ihe ọ bụla ma kwaga ebe ndị ọzọ iji biri.
Ajọ ifufe enweghị ike ịbido na Spain ebe ọ bụ na oke osimiri dị ezigbo oyi ya mere naanị oke ifufe nke otu ike nwere ike ịmalite. Oké ifufe chọrọ oké okpomọkụ nke oké osimiri ka ha nwee ike ịmalite dị ka ọ dị na mpaghara Atlantic ma ọ bụ Pacific dum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ihe kpatara na enweghi oke ifufe na Spain
Na-eme ka mbara ala ọzọ na-alụso mgbanwe ihu igwe ọgụ